मनोरञ्जन Archives - Page 107 of 117 - Samudrapari.com
मनीषा दुई बच्चाकी आमा बन्ने
मुम्बई- नेपाली व्यवसायी सम्राट् दाहालसँग लगभग सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुगेकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला दुई बच्चाकी आमा बन्ने सुन्दा अचम्म लाग्यो होला । तर यो वास्तविक जीवनमा होइन, रामगोपाल बर्माले बनाउन लागेको एक हरर फिल्ममा उनी दुई बच्चाकी आमा बन्नेछिन् । क्रेज घटिसकेकी मनीषालाई बर्माले आफ्नो चलचित्रमा लिने साहस गर्नु बलिउडमा नौलो विषय बन्न पुगेको एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ । उक्त फिल्ममा मनीषालाई भूतको रोल दिइएको अड्कल काटिएको छ । तर, बर्माले भने मनीषालाई भूतको रोलमा नभई दुईटी बच्चाकी आमाको भ...
पूजाको सेक्स रुचि
काठमाडौं- आधा दर्जन घोषित अघोषित पति फेर्दै आएकी नायिका पुजा लामाले अनौठो सेक्स चाहना बताएकी छिन् । शुक्रबार साप्ताहिकसँगको कुराकानीमा उनले आफूलाई रातिभन्दा बिहानीपखको सेक्समा बढि रुची जाग्ने उल्लेख गरेकी छिन् । सेक्स एउटा नशा भएको बताउँदै उनले सेक्सको लत कसलाई कति लाग्छ भन्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक हुने र आफुलाई पनि सेक्सको नशा लागेको बताइन् । सेक्स बिनाको जीवनको कल्पना समेत गर्न नसकिने पूजाको ठम्याइ छ । ब्लु फिल्मबारे सोधिएको प्रश्नमा पूजाले ब्लु फिल्म हेर्दा एक्साइटमेन्ट बढ्ने र सेक्सको चा...
मिस नेपाल– २०१२, २३ जना छानिए
काठमाडौं– मिस नेपाल– २०१२ का लागि २३ जना प्रतिस्पर्धी छानिएका छन् । इन्टरनेशनल क्लव सानेपामा भएको अन्तिम स्पर्धामा २३ जना छानिएको आयोजक हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दर लाल कक्षपतिले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती २३ जनाले मिस नेपालका लागि भिड्न पाउनेछन् । द हिडेन ट्रेजरको आयोजनामा सम्पन्न हुने यस पटकको प्रतियोगिता विगतको तुलनामा चाँडै हुन लागेको हो। बितेका प्रतियोगिताहरू अगस्ट महिनामा सञ्चालन हुँदै आए पनि यसपटक भने अप्रिल महिनामा सञ्चालन भएको छ। मिस नेपाल प्रतियोगिता विजेताले मिस वर्ल्डमा न...
असार १ देखि हाइवे, जापानमा पनि रिलिज हुने
काठमाडौं– बर्लिन फिल्म महोत्सवमा छानिएको नेपाली फिल्म ‘हाइवे’ आउँदो असार १ गतेदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ । यस फिल्ममा नेपालमा हुने गरेको राजमार्ग अवरोधको कथा छ । नेपालमा रिलिज भएपछि पनि यो भारत, जापान, कोरिया, अमेरिका र अफ्रिकाका विभिन्न महोत्सवमा घुम्ने सम्भावना रहेको वितरक नरेन्द्र महर्जनले बताए । हाइवेमा लुटका केही कलाकार पनि समावेश छन् । सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, कर्मा, विनय श्रेष्ठलगायतले अभिनय गरेका छन् । दीपक रौनियारले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा पत्रकार रविन्द्र मिश्रले पनि अभियन गरेका छन् ...
‘पोर्न भिडियोमा खेल्दिन’
टेलिभिजन रियालिटी शो बिग बोसमा भारतमा चर्चित अमेरिकी पोर्न स्टार सनी लियोनले पोर्न भिडियो उद्योग छाड्ने संकेत गरेकी छिन् । हाल भारतमा जिस्म- २ को अभिनयका लागि आएकी उनले ३ सय ६५ दिन नै बलिउडमा व्यस्त रहने भएकाले पोर्न भिडियोमा नखेल्ने संकेत दिएकी बीबीसीले जनाएको छ । पुजा भट्टको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म सन् २००३ को जिस्मकै सिक्वेल हो ।
राजेश हमाल अब तीतो-सत्यमा
काठमाडौं- केही महिना हास्यश्रंखला मेरी वास्सैमा अभिनय गरिसकेका हमालले बैशाख महिना भित्र तीतो सत्यमा पनि देखिने भएका छन् । तीतो सत्यका निर्देशक दिपक राज गिरीका अनुसार दुई हप्ते यूके भ्रमणका क्रममा महानायकसंग स्टोरी जोडेर तीतो सत्यको कथामा नयाँ टेष्ट भर्न लागिएको हो । यो बिषयमा न्यूज बाहिरिएपछी दिपकले भने 'काम गर्नुभन्दा अघि थाहाँ पाउनु भएछ अब अलिकति सुन्नुस, पशुपतिको जात्रा सिद्राको ब्यापार भनेझै हामी कार्यक्रमको सिलसिलामा यूके जाने भएकाले सो समयमा बिदेशमा पलायन भएका कलाकारहरुको प्रसङ्गलाई...
नायिका ऋचाको प्रिगनेन्सी फोटो सेसन (फोटोफिचर सहित)
सुव्रत आचार्य नायिका ऋचा घिमिरेले गर्भावस्थाको छैटौं महिनामा काठमाडौं क्रेज डट कमका फोटोग्राफर कवीन्द्रमान शाक्यसँग फोटोसेसन गराइन्। युरोप, अमेरिकातिर मात्र देखिने यस्तो सौख नेपालमा सम्भवतः पहिलोपल्ट देखा परेको हो। अर्को रोचक कुरा त के भने उनले ती तस्बिर सार्वजनिक गर्न समेत रुचि देखाइन्। यसअघि नायिकाहरू सञ्चिता लुइँटेल र अरुणिमा लम्सालका गर्भवस्थाका केही तस्बिर सार्वजनिक भए पनि उनीहरूले फोटोसेसन नै गराएको कुराचाहिँ चर्चामा आएन। ऋचाको गर्भावस्थाको तस्बिरले डेमी मुरको गर्भावस्थाका तस्बिरको सम्झ...
फिल्म चपली हाइटको विरोधमा युथफोर्स
विराटनगर – नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युथफोर्सले शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘चपली हाईट’ को प्रदर्शनमा अवरोध गरेको छ । सेन्सर बोर्डले नै वयस्कहरुले मात्र हेर्ने सर्टिफिकेट दिएको चपली हाईटले अश्लिलता निम्त्याएको भन्दै युथफोर्सले विराटनगरको हिमालय टाकिजमा चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध गरेको हो । मंगलवार दिउँसो ३ बजेको शो सुरु हुनै लाग्दा पुगेको युथफोर्सका कार्यकर्ताले चलचित्र प्रदर्शनमा अवरोध गरेका थिए । तर पछि युथफोर्स कार्यकर्ता र हल संचालकबीच सहमति भएपछि ३ बजेको शो आधाघण्टापछि सुरु गरिए...
नांगो तस्बिरले बधाई
नयाँदिल्ली- आफ्नो टिमले जितेपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालबाट, भेटेर वा एसएमएस गरेर शुभकामना दिनुहुन्छ होला । तर भारतीय मोडल पुनम पाण्डेले भने नयाँ जुक्ति निकालिन् । पाकिस्तान विरुद्ध आक्रामक १ सय ८३ रन बनाएर आफ्नो टिमलाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भारतीय ब्याट्सम्यान विराट कोहलीले हरेक कुनाबाट बधाई प्राप्त गरिरहेका बेला पुनमले पनि बधाई दिइन् । यस्तो अवस्थामा भारतीय टिमले विश्वकप जितेपछि निर्वस्त्र हुने घोषणा गरेर चर्चामा आएकी पुनम पाण्डे कसरी चुप लागेर वस्न सक्थिन र ? त्...
ऐश्वर्याकी छोरीको नाम आराध्या
मुम्बई– बच्चन परिवारको उत्तराधिकारीका रुपमा रहेकी नातिनी बच्चन जन्मेदेखि नै रहस्यको घेरामा रहिन् । बच्चन परिवारले उनको तस्बिर र नाम लामो समय सार्वजनिक गरेन । यसैले सञ्चारमाध्यममा उनको बारेमा धेरै चर्चा गरियो । चार महिनाको प्रतीक्षापछि बच्चन परिवारको नयाँ उत्तराधिकारीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार बेटी बच्चनको नाम आराध्या बच्चन राखिएको छ । दुई दिन अघि स्थानीय प्रशासनमा आराध्या बच्चनको रुपमा उनको नाम दर्ता भएपछि बच्चन परिवारको नयाँ सदस्यको नाम सार्वजनिक भएको थियो ।